बैंकका कर्मचारीहरु कोरोनाको जोखिममा, सुरक्षित कसरी हुने ? | ictkhabar
बैंकका कर्मचारीहरु कोरोनाको जोखिममा, सुरक्षित कसरी हुने ?
Jun Sat 2020 11:23:35
काठमाडौं । लकडाउनका बेला बैंकका शाखाहरु सञ्चालनमा छन् । शुरु शुरुमा बैंकका काउन्टहरुमा भीड थिएन । तर जेठको दोस्रो हप्तापछि बैंकका शाखाका काउन्टहरुमा भीड बढ्न थालेको छ । यो सातादेखि नीजि उद्योग क्षेत्रलाई केही खुकुलो बनाउँदा बैंकहरुमा भीडभाड बढ्दै गएको छ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सेवाग्राहीहरु उकुसमुकुस भएर बाहिर निस्कन थालेपछि पनि बैंकमा भिडभाड बढेको हो ।
बैंकमा कोरोनाको जोखिम : कर्मचारी तथा ग्राहकहरुलाई कोरोनाबाट यसरी सुरक्षित बनाऔं - डा. रविन्द्र पाण्डे
बैंकहरुले सबै शाखा कार्यालयहरु खोल्न पाएका छैनन् । खुलेका शाखामा पनि सबै कर्मचारीहरु राखेर पूर्णरुपमा सेवा दिन नपाएका कारणले पनि भिड बढेको बैंक सञ्चालकहरु बताउँछन् । यसरी बैंकमा भीडभाड बढ्न थालेसँगै बैंकका सुरक्षाको उपाय सन्तोषजनक देखिदैन । केही बैंक शाखाहरुमा बाहेक अधिकांश बैंक शाखाका सामाजिक दुरी कायम राखेको देखिदैन । काउन्टरमा ग्राहकहरु भीडभाड गरी सेवा लिइरहेका छन् । बैंकका कर्मचारीहरुले पनि भरपर्दो पीपीई लगाएका छैनन् । केहीले लगाएका माक्सहरु पनि सही तरीकाले लगाएका छन् ।
सरकारले बैंकका कर्मचारीहरुलाई सवारी पास कम दिएको र बैंकको परिचयपत्रका आधारमा प्रहरीले हिँडडुल गर्न नदिएका कारण कर्मचारीहरु थोरै परिचालन गर्नुपरेको र भीड बढेको गुनासो बैंकर्सहरुको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनिल केसरी शाहले सवारी पासमा कडाइ हुँदा बैंकमा भिड देखिएको बताए ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ रविन्द्र पाण्डेकै अनुभवमा बैंकमा भीडभाड बढिरहदा कोरोनाको जोखिम बढाएको छ ।
बैंक स्टाफ तथा ग्राहकलाई सुरक्षित बनाऔं - Rabindra Pandey
Pandey भन्नुहुन्छ बैंक स्टाफ र ग्राहक कोरोना संक्रमणबाट बच्ने सबैभन्दा अचुक उपाय व्यक्तिगत दुरी हो । हरेक बैंकले ६ फिटको दुरी कायम गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु अनिबार्य छ । हामीले १र२ बर्षसम्म सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ माथि उल्लेखित ब्यबस्था र अभ्यास गर्नुको बिकल्प छैन ।
म कामबिशेषले बैंक गएको थिएँ ्हप्तामा १(२ दिन सिमित शाखा सिमित समयको लागि खुल्ने भएकोले बैंकमा ठूलो भीड थियो ्रच्यानल गेटभित्र उभिएर पालो अनुसार बोलाउने गार्ड र ग्राहकबीच १ फिटको पनि दुरी थिएन ।
कुनै स्टाफले माथिबाट मुख हेर्न मिल्ने गरि मास्क लगाएका थिए, कुनै स्टाफले नाकको तल तथा घांटीमा मास्क लगाएका थिए ्ग्राहकसंग कुरा गर्दा आधा फिटको दुरी पनि देखिएन ्र ग्राहक तथा स्टाफले प्रयोग गर्ने टेबुल १ फिटको थियो होला ्र दुवै पक्षले मास्कभित्रबाट बोल्नुपर्दा आवाज सुन्न टाउको जोड्नुपर्ने बाध्यता देखिन्थ्यो ्र उही टेबल, उही डटपेन, उही चेकबुक, उही रजिस्टर प्रयोग सबैले गरिरहेका थिए ्र कोरोना संक्रमणको त्यो जोखिम हटाउन बैंकहरुले बिशेष ब्यबस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ्र